Re:ဘ၀တွင်ရှင်သန်ခြင်း - သစ္စာတရား
သစ္စာတရား ဘာသာ၊သာသနာ ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင် ဆွေးနွေးပွဲ ဘ၀တွင်ရှင်သန်ခြင်း (1 viewing) (1) Guest Favoured:0Page: << Start < Prev 123 Next > End >>
#62 kyaw (Visitor)
စေတီပဉ္စမအရစ် Posts: 44
ဘ၀တွင်ရှင်သန်ခြင်း4Years, 1 Month ago
Karma:3ဘ၀တွင်ရှင်သန်ခြင်းတွင် ရုပ် နှင်. စိတ် နှစ်ပိုင်းရှိရာတွင် အများစုသည် ရုပ်တရားကို
တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို.ဆန်းစစ်ဖန်တီးကြပါတယ်။ စိတ်တွေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို.
ကိလေသာတွေက ဖုံးထားသောကြောင်.မေ.လျော.နေကြ၏။ဖန်တီးထားသော ရုပ်မျိုးစုံအပေါ်တွင်
ကိလေသာ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တွေ.နဲ. ဝေဒနာ
တရစပ်ကြီးခံစားကြ၏။ အဲဒါကိုပျော်ရွှင်ခြင်းလိုဆိုပြီး အမှတ်အမှားသညာနဲ.တပ်ကာ ဥပါဒန်တွေဖြစ်ပြီး သံသရာကြီးချဲ.တော.၏၊ ဒါကြောင်.စိတ်ကလေးအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ဖို. လုပ်ရပါမယ်။ ခံစားနေသော ရုပ်တရား ဝေဒနာပေါ်မှာ တရပ်စက် ဖြစ်ပျက်နေတာကို သိအောင်လုပ်ဖို.လုပ်ရပါမယ်။ ရုပ်တရား ဘယ်လိုပင်
တိုးတက်အောင်လုပ်သော်လည်း ရုပ်တရားတွင်ဖွဲ.စည်းထားသော အမှုန်.များသည် အချိန်တိုင်း ပျက်နေပါ၏။
ဒါကြောင်. အချိန်တိုင်း အပျက်ကိုဦးတည်နေပါ၏။ စကြာဝဌာ တွင် ရှိသောရုပ်တရားများသည် ငြိမ်နေသည်မရှိ အမြဲတမ်.ရွေ.လျားနေ၏။ မဟာဘုတ်လေးပါးကချဲ.လှယ်ဖန်တီးနေကြ၏။ အပူအအေး၊တွန်းကန် ထောက်ကန်၊ ဖွဲ.စည်း ၊အပျော.အမာသဘောကရုပ်တရားအမှုန်တိုင်းမှာရှိနေကြ၏၊အဲဒီမဟာဘုတ်လေးပါး အပေါ်မှာ ကံမျိုးစုံက ဆရာလုပ်ပြီး စီမံနေကြ၏။ မကောင်းသော ကံပြုလုပ်တဲ.သူဟာ မကောင်းမှုကံကနေပြီးတော. မဟာဘုတ်
ဓာတ်တွေကိုသုံးပြီး အပါယ်ခန္ဓာတွေဆောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကောင်းသောကံကိုပြုလုပ်သူကို
လည်း ကောင်းသောကံက လူ.ခန္ဓာ၊နတ်ခန္ဓာတွေဆောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဖြင်.ကံဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်သာလဲဆန်းစစ်ရတော.မယ်။ ကောင်းသောကံ၊မကောင်းသောကံ ဖြစ်အောင်စိတ်ကလေးကပြုလုပ်နေတာပဲ။ ဒါကြောင်.မကောင်းသော ကံတွေမလုပ်မီအောင် ကံ၏ဆရာ စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ဖို. ဆန်းစစ်ဖို.လုပ်ရပါလိမ်.မယ်။ ဘယ်လိုဆန်းစစ်
စိတ်ကလေးက ဘယ်အရာကိုအာရုံအညွှတ်များသလဲ။ဘယ်အရာအပေါ်မှာအနေများသလဲ အာရုံတေ
ွတိုက်ခိုက်တိုင်း ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေ စိတ်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ။ စိတ်တွေက မကြာခဏ ပူလောင်နေ သလား။ အဲဒီလိုစိတ်အမျိုးအစားတွေ ကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ပါ။စိတ်ကလေးတွေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို.
ကိလေသာအညစ်အကြေးများကို စိတ်ပေါ်ကနေပြီး အဖြစ်အပျက်လေးကို ရှုပြီး တဖြည်းဖြည်းခွာရပါလိမ်.မယ်။
#63 sofital (Visitor)
Re:ဘ၀တွင်ရှင်သန်ခြင်း4Years, 1 Month ago
Karma:3အထက်ကဆွေးနွေးတဲ. အကြောင်းအရာများကို ပြောင်းပြန်ဆန်းစစ်မယ်ဆိုလျှင်
ကိလေသာ တွေကစိတ်ကိုချယ်လဲတော. စိတ်တွေက မကောင်းတာတွေကြံမယ်၊ပြောမယ်.
တွေရကြပြီဆိုလျှင် မကောင်းသော ခန္ဓာတွေကို မဟာဘုတ်လေးပါးကဆောက်ကြလိမ်.မယ်။
ခန္ဓာတွေရလာပြီဆိုလျှင် ခန္ဓာဘေးဒဏ် အန္တရာယ် ဒုက္ခတွေရကြမယ်။ ဖြစ်လာတဲ. ခန္ဓာကိုအရင်းအကြောင်းပြုပြီး ကိလေသာတွေက ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်
ှီုမယ်။ ခန္ဓာအခွန်တွေထမ်းဆောင်ကြရမယ်။ ဘယ်လိုထမ်းဆာင်ရသလဲ ဆိုတော.
ခန္ဓာအသက်ရှင်ဖို. စားဖို.လည်းရှာရမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်.ကို ဥတု နှင်.တခြားသော ဘေးဒဏ် အန္တရာယ်ကာကွယ်အောင် ၀တ်ဖို.လည်းရှာရမယ်။ နေရေးဖို.လည်းရှာရမယ်။အိုခြင်း၊နာခြင်း၊သေခြင်း တွေလည်းခံစားရမယ်။
်ခန္ဓာအိမ်.မှာ နေကြတဲ. ရောဂါပိုးမျိုးစုံကနှိပ်စက်တဲ. ဝေဒနာမျိုးစုံလည်းခံရမယ်။
အရာသိချင် ကောင်းတာလေးကိုမြင်ချင်ကြားချင်ခံစားချင်တဲ. အတွက် TV,cassette,MP3 player,game station, DVD player,computer ၀ယ်ရှာပြီး အခွန်
ဆက်ရမယ်။ ကောင်းတဲ.အတွေ.အထိတေ.ွ စိတ်လေးကခံစားဖို. fan ,air conditioner ရှာပြီး ၀ယ်ရမယ်။
် ဒုက္ခတွေ.မြင် သဘောပေါ်က်အောင် ဥပမာပေးထားခြင်းပါ။ စိတ်မှာကပ်ငြိနေသော ကိလေသာများကိုတိုက်ထုတ်ဖို. သီလရယ်၊သမာဓိရယ်၊ပညာရယ်
သုံးပိုင်းရှိပါတယ်။ သီလမျိုးစုံ ဆောင်ထိန်းခြင်းဟာ ကိလေသာ သစ်ပင်ရဲ.အကိုင်းအခက်အရွက် များကို ဖြတ်တာနှင်.တူပါတယ်။ သီလစောင်.ထိန်းခြင်းတခဏ
အချိန် ပိုင်းလေးမှာ စိတ်ကလေးကို ကိလေသာမဖြစ်အောင် စောင်.ထိန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊သီလ
မစောင်.ထိန်းတဲ. အချိန်မှာ ကိလေသာကပြန်ထလာပြီး သောင်းကျန်းပါတယ်။ သမာထက တော. ကိလေသာသစ်ပင်ရဲ. ပင်စည်ကိုဖြတ်တာနှင်.တူပါတယ်။ သမာထ အရှိန်ပေါ်မူတည်ပြီး
ကိလေသာက ငြိမ်ဝမ်ပြီးဥနေပါတယ်။သမာထအရှိန်ပျယ်တော. အမြစ်မပျက်တော. ကိလေသာတွေပြန်ပြီးထလာပြီး ပင်စည်၊အကိုင်းအခက်တွေ.ပြန်ပြီးရှင်သန်လာပါတယ်။ ဒါကြောင်. ပညာနဲ.ဖြတ်မှ ကိလေသာအမြစ်ကြီးဟာ ပြိုလဲပါတော.တယ်။
#64 sofital (Visitor)
Karma:3ဒီခတ်တချို. လူတွေက လက်တွေ.မြင်မှပဲ ယုံတတ်ကြတယ်။နတ်ပြည်၊ငရဲပြည်မရှိဘူး။နောင်ဘ၀မရှိဘူး လို.ဆိုပြီး ယူဆနေကြတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားများ ပြောတာ မယုံကြဘူး သာဓကအားဖြင်. ဘာသာရေးဖိုရမ် မှာကြည်.လျှင် တွေ.နိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ.မြင်မှ ယုံမယ်ဆို လျှင် သမာထ အရင်အားထုတ်ရမယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ. တရားတော်ဟာ နောင်ဘ၀ကို စောင်.စရာမလိုပါ။ တကယ်အလုပ် လုပ်မယ်.ဆိုလျှင် ဒီဘ၀မှာပဲပြီးပါတယ်။
အာနာပါနသမထကမ္မဋ္ဌာန်း ရှုမှတ်ပွား ပြီး သမာထ ပဋိဘာဂအလင်းနိမိတ် ဖြင်. နတ်ပြည် ငရဲပြည်၊ အတိတ်ဘ၀ ပြန်ကြည်.လိုရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေ ဖိုရမ်မှာ ပြောတော. အများစုက ကန်.ကွက်ကြတယ်။ မောင်းထောင်မြေဇင်တောရ၊ သဲအင်းဂူ၊ ဖားအောင်ဆရာတော်များ နှင်.ဦးဌေးလှိုင်တို.က အဲဒီနည်းလမ်းများ
ကိုဖော်ထုတ်ပြီး ရဟန်းနှင်.ယောဂီတွေများကို သင်ကြားပေးပါသည်။ သေသူကိုရှင်သူက တမ်း
တလိမ်.မယ်လို သဲအင်းဆရာတော်ကဟောပါတယ်။ ကိုယ်.ရဲ.သေသွားတဲ. ဘိုးဘွားဆွေမျိုး
ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ တွေ.ပြီး တရားရပါမယ်တဲ.။ ဒီတရားတွေအားထုတ် ဖို.ကလည်း ပြင်းထန်တဲ. ဝေဒနာကိုကျော်လွှားမှ ရမှာ။သက်တောင်.သက်သာ အားထုတ်ပြီး ပြင်နေလိုကတော.ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အပါယ်လေးဘုံမှာခံစာရမယ်. ဝေဒနာဒုက္ခ တစ်ဆယ်. ပိသာကို တရားအားထုတ်လို ဖြစ်လာတဲ. ဝေဒနာဒုက္ခ တစ်ဆယ်.သားနဲ. လဲကြပါ။ အဲဒီလို သည်းခံမှ ဝေဒနာ ပေါ်ကနေ ကိလေသာမလာပဲ မဂ်ပညာတွေ ဖြစ်မှာ။
မဂ်ဆိုတာ ဝေဒနာပေါ်က နေကိလေသာတွေကိုသတ်လိုက်တာ။ ကိလေသာမရှိတော. ငြိမ်း
အေးသော ချမ်းသာဖိုလ်လေးကိုခံစားကြရမှာပါ။ သမာထ ကြောင်.ပညာတွေဖြစ်ကြရတယ်။
ကျောင်းပညာရေး မှာလည်းတချို.ဘာသာမှာ practical lab ဓာတ်ခွဲခန်း လုပ်ရသလို ပဲ တရားစာဖတ်လိုရတဲ.အသိတွေ.နဲ. မနေကြပဲ အဲဒီအသိတွေကို ခန္ဓာဓာတ်ခွဲ.ခန်းထဲမှာရှာရပါမယ်။ ခန္ဓာဓာတ်ခွဲ.ခန်းနေပြီး ဓာတ်တွေ၊ပရမတ်တွေ၊ခန္ဓာငါးပါးတွေ၊အကြောင်းအကျိုးလည်တာတွေရှာပြီး ကိလေသာသေအောင် အမြတ်ထုတ်ကြပါ။
ဝေဒနာ၊သညာ၊စိတ်တွေအပေါ်ကနေပြီး ကိလေသာတွေပေါ်လာတာ အရမ်းမြန်လွန်းလို တရားအားထုတ်ခါစမှာ အဖြစ်အပျက်မြင်တာ နှေးလို. ကိလေသာတွေကို သတ်ရမှာဥာဏ်ကနောက်ကျနေပါမယ်။ အဖြစ်အပျက်မြင်တဲ. အကြိမ်အရေအတွက်များလာလေ အဖြစ်အပျက်ရှုတာ မြန်လာလိမ်.မယ်။ အဖြစ်အပျက်ရှုတာ မြန်လာလေ နောက်ဆုံးမှာ ကိလေသာအမြန်ှုနှုန်းကို လိုက်မီသွားပြီး ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင်.မရတော.ပဲ သေသွားတာ
ကိုတွေ.ရပါတော.မယ်။ ဒီလိုနဲ. ကိလေသာတွေ သေတာများလာလေ ကိလေသာပါးလာ
လေလေ မဂ်ခရီးလမ်းကလည်းနီးလာလေပါပဲ။ဒါကြောင်. ဥာဏ်တွေ.ကို အချိန်တိုင်းထက်နေ အောင်လုပ်ကြမှ မြန်လွန်းလာတဲ. ကိလေသာကို စောင်.ဖမ်းနိုင်မှာပါ။
#65 winmyint (Admin)
Moderator Posts: 42
Karma:3မင်္ဂလာပါ..ကိုဆိုဖီတဲလ်...
အလုပ်သမားရေးတာကြောင့်...ဖတ်ပြီး ဆင်ခြင်ရတာ..အများကြီး တန်ဖိုးကြီးပါတယ်...စာအုပ်အအုပ်တစ်ရာကို ဖတ်ရတာထက်...လျှပ်စီးလျှပ်တစ်ပြက်မျှ..ခန္ဓာကပြတဲ့ အရှိသဘာဝကို သတိ-ပညာဖြင့် ထိုးထွင်းသိ၊ ပိုင်းခြားသိ၍ ရေးပြ ပြောပြတာကို ဖတ်ရ၊ သိရတာက ပို၍ တန်ဖိုးကြီး၊ အကျိုးမြတ်အားကြီးလှပါတယ်...
ကံမကုန်သရွေ့ ဆက်လက်၍ ဖတ်ရှုနေပါမည်။
#68 sofital (Visitor)
Karma:3နေ.စဉ်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းရာတွင် အိပ်ရာဝင်အချိန်လေးမှာ ဒီနေ.တနေ.တာရဲ. စိတ်ကလေး
ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်သင်.ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းကနေ အိပ်ရာဝင်ချိန်အထိ အချိန်ကလေးများကို
တစ်နာရီခြားပိုင်းပြီးသုံးသပ်ဆန်းစစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ-မနက်စာ စားတဲ.အချိန်မှာ စိတ်ကလေးက
ဘယ်လိုဖြစ်နသလဲ။ လမ်းသွားတိုင်းအချိန်လေးမှာ စိတ်ကလေးက ဘယ်ကိုတွေးနေသလဲ
ဘယ်သူ.တွေ.နဲ.တွေ.လျှင် ဒေါသထွက်သွားသလဲ၊ဈေးဝယ်တဲ. အချိန်မှာ ဘယ်ဟာလေးကို
တွေးပြီးနှစ်သက်နေလဲ။ သူငယ်ချင်းနဲ.စကားလက်ဆုံကျတဲ.အချိန်မှာ မာနစိတ်၊မနာလိုစိတ်၊
မခံချင်စိတ်၊သဘောမကျတဲ.စိတ်၊ ပျော်ရွှင်တဲ.စိတ်၊ ဖြစ်နေသလား။ အလုပ်ထဲမှာ ဘယ်သူ.နဲ.
မတဲ.လိုဒေါသစိတ် လျှက်တပြက်ထွက်သွားသလား၊ အလုပ်မှာ စိတ်ဝန်ပိနေသလား။ ဖိစီးနေသလား၊ စိတ်ကလေး ကျဉ်းကျပ်နေသလား၊ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေသလား။ ကိုယ်.၀ယ်
ထားတဲ. အရာပျက်စီးသွားလို နှမြောနေသလား။ တီဗီကြည်.တဲ.အချိန်မှာ ဘယ်လိုစိတ်တွေ.
ဖြစ်နေသလဲ။ သီချင်းနားထောင်ပြီး နှစ်သက်နေသလား၊ ဂိမ်းလေးကစားပြီး ပျော်ရွှင်နေသလား။ အစရှိသည်. စိတ်တွေကိုသုံးသပ်ပြီး အိပ်တဲ.အချိန်မှာ အဲ.ဒီစိတ်တွေ
မရှိတော.ပါလား။ အိပ်ချင်စိတ်ပဲလာပါသလား။ အဲဒီလိုသုံးသပ်တာများလာရင် ကိုယ်.စိတ်
အကြောင်းကိုယ်.သိလာလိမ်.မယ်။ စိတ်ရဲ.လက္ခဏာ တွေကို တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်
လာပါမယ်.၊ အမြင်မှား၊အမှတ်မှား၊အသိမှားတွေ မြင်လာပါလိမ်.မယ်။ စိတ်ရဲ.လက္ခဏာ
ကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်ပြီး ဥာဏ်မှာထင်လာမလဲ. ဆိုတော. စိတ်ကလေးက ထားတဲ.အာရုံမှာ မနေပဲ ပြောင်းလဲခံစားနေပါလား ၊ ပြောင်းလဲနေတဲ. ရုပ်တွေကို စိတ်ကလေး ကပြောင်းလဲပြီး လိုက်ညွှတ်နေရပါသလား၊ စိတ်အသိလေးနှင်. ရုပ်တရားဟာ တထပ်တည်းဖြစ်ပြီး ပျက်ပါလား။ စိတ်ကလေးဟာ ကောင်းတာလေးကို မြင်ချင်၊ကြားချင်၊သိချင်၊စားချင်၊ထိချင်၊နံချင် နေပါလား။ စိတ်ကလေးဟာ မကောင်းတာလေးကို သိလိုက်ရ၊မြင်လိုက်ရ၊ကြားလိုက်ရ၊နံလိုက်ရ၊ထိလိုက်ရ လျင် တွန်.ဆုတ်ပြီး မနေချင်တော. ပါလား။ စိတ်တွေကိုပိုင်းပြီး အာရုံကို သိတတ်တဲ.စိတ်တစိတ်လေးဟာ
လည်း ပေါ်ပြီးပျက်ပါလား။အာရုံတွေ.ပြောင်းတိုင်း စိတ်ကလေးကလိုက်ပြီးသိနေရပါသလား။
စိတ်ကလေးဖြစ်ချင်လို ရုပ်တရားကြီးက ထလုပ်လိုက်ရပါသလား။ ရုပ်တရားကြီး
က ဖောက်ပြန်လို စိတ်ကလေးက ခံစားလိုက်ရပါသလား အဲဒီလို လက္ခဏာတွေ.
သဘောပေါက်လာပြီး အရှိတရားကတော. စိတ်လက္ခဏာပါလား။ မရှိတရားက တော.
စိတ်ကလေးက ပညတ်ပေါ်မှာ အာရုံတင်နေပါလား။ ပညတ်အခေါ်အဝေါ် လိုတပ်ပြီး ပြောလိုက်လို သိတဲ.သဘောလေးပါလား။ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ထားတဲ.အသုံးအနှုန်းဟာ
မရှိတရားပါလား။ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်တဲ. ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းဟာ ရှေးကျသော
လူတွေကသတ်မှတ်ထားပါသလား။ လူတိုင်းသတ်မှတ် နာမည်ပေးလိုရလို မရှိတရားပါလား။
ရှိတာကတော. စိတ်၏လက္ခဏာပါလား၊ ရုပ်တရား အသစ်တွေဈေးကွက်မှာပေါ်လာတိုင်း
အမည်ဝေါဟာရအသစ်တွေလည်း ဝေါဟာရအဘိဓာန်ထဲမှာတိုးနေရပါသလား ၊အဲဒီဝေါ်
ဟာရအမည်ဆိုတာ လူအချင်းချင်းနားလည်အောင် သိအောင်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေ ရပါသလား
အရှိတရားတော.မဟုတ်ပါလား။ငါ.စိတ်ဆိုတာ ရှာမတွေ.ပါသလား၊ သူ.သဘော သူ.
စိတ်၏လက္ခဏာအတိုင်း ဖြစ်နေပါလား။ သညာမျက်လှည်.ဆရာ ကလှည်.စားထားလို
ိသူရဲ.လျို.၀ှက်ချက် စိတ်၏လက္ခဏာကိုမသိခဲ.ရပါသလား၊အဲဒီလိုမြင်မှ စိတ်ကလေးမှာ မြင်နေတဲ. ဒိ ဌိ အမြင်တွေပြုတ်ကုန်မှာ။
#69 sofital (Visitor)
Karma:3်ိကိုဝင်းမြင်....မင်္ဂလာပါ။
ကိုဝင်းမြင်. ၏အားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုဝင်းမြင်.ရေးသား
နွေး ကူးလိုရပါတယ်။စာလုံးပေါင်း စာကြောင်းမှားတာရှိလျှုင် သည်းခံပြီးဖတ်ပေးကြပါ။
Forum List ဘာသာ၊သာသနာ ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင် ဆွေးနွေးပွဲ Board Categories UsernameAndPassword ရယူရန်ဘာသာ၊သာသနာ... ဓမ္မဒါနအဖြာဖြာ... တရားဓမ္မဆွေးနွေးရာအဖြာဖြာ... ရေးသားမျှဝေ အသိကြွယ်... သတင်းတိုထွာအဖြာဖြာ... ကဗျာများ Powered by FireBoard
Copyright © 2010 Thitsartayar.Com Donated by: Saydanarshinmalay Designed by: Thitsartayar.com